नेपाल आज | प्रियंका, बरदानरुपी रोचकसंग किन गर्यौ सम्बन्ध बिच्छेद?
प्रियंका, बरदानरुपी रोचकसंग किन गर्यौ सम्बन्ध बिच्छेद?
सोमबार, १० जेठ २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज (MG)
पाठकवृन्द, नेपालमा पनि सम्बन्ध बिच्छेद सामान्यजस्तै हुन थालेको छ । अग्नी भाकेर जीबनसाथी बनेकाहरु एकाध बर्षमै अलग हुने क्रम बढ्दो छ । सम्बन्ध बिच्छेदको क्रम बढ्दै जांदा परम्परागत पारिवारिक मान्यतापनि भत्किन थालेका छन् । जिंउनेमर्ने, संगै हिड्ने कसम खाएकाहरु आधा बाटो नहिड्दै छुट्टिनु पक्कै राम्रो होइन । तर, सम्बन्ध बिच्छेद कसैको रहर होइन । तसर्थ हामी श्रृखंलाबद्धरुपमा सम्बन्ध विच्छेदका कारण खोज्ने छौं । शुरुका केही भागमा हामीले सम्बन्ध बिच्छेद गरेका चर्चित पात्रको चर्चा गर्नेछौं । त्यसपछि ति पात्र र विज्ञसंगको जवाफ लिएर आउनेछौं । पहिलो अध्याय प्रियंका कार्कीमा केन्द्रीत छ । सम्पादक
प्रियंका कार्की अभिनयकै लागि जन्मेकी हुन् । निर्देशक र समीक्षकले आमरुपमा यही भन्ने गर्दछन् । अमेरिकामा फिल्म अभिनय र निर्देशनका बारेमा पढेर आएकी उनी भुमिकाअनुसार आफुलाई ढाल्न सक्छिन् । पछिल्लो समय असाध्यै रुचाइएकी नायिका हुन् प्रियंका । चलचित्रमा मात्र होइन, जीबन व्यवहारमै पनि उनी अभिनयकर्ता बन्न पुगेकी छन् । नियतीको खेल वा प्रियंकाको नियत, उनको भनाइ र गराइमा तालमेल मिल्दैन । सन्र्दभ हो रोचक मैनालीसंगको जीबन यात्रा । रोचक मैनाली र प्रियंका कार्कीका बीचमा सन् २०१० जुलाइ १७ मा बिहे भएको थियो । उनीहरुको रोमान्स अमेरिकामा चल्यो झण्डै अढाइ बर्ष ।
एकअर्कासंग मस्त भिजेर एकअर्कालाई पूरै बुझेर उनीहरुले विहे गरेका थिए । खाशमा उनीहरु काठमाडौं ज्ञानेश्वरका छिमेकी थिए । रोचक उमेरले अलि ठूलै थिए । प्रियंका सानै भइकनपनि स्टाइलिस थिइन् । राम्री प्रियंकालाई अलि ठूलैले पनि हेर्थे । त्यसैमध्येका एक थिए रोचक । अमेरिका पुगेपछि मात्रै रोचकलाई चिनेकी थिइन् प्रियंकाले । प्रियंकाका शब्दमा रोचक नामजस्तै रोचक थिए । सन् २०१३ को जनवरी महिनामा प्रियंका र रोचक एउटा टिभी कार्यक्रममा पुगेका थिए । जहां प्रियंकाले रोचकलाई नामजस्तै रोचक भनि प्रशंसा गरेकी थिइन् ।
त्यतिमात्रै प्रियंकाले हतारमा विहे गरेजस्तो नलागेको प्रष्टाएकी थिइन् । २२ बर्षमै विहे गरेकी प्रियंकाले विहेपछिको जीबन आरामदायी रहेको पटकपटक दोहोराएकी थिइन् ।
रोचकको गुनासो थियो,‘साना कुरामा झगडा गर्छे, जे पायो त्यही खान्छे ।’ प्रियंकाको कुनै गुनासो थिएन । उनले भगवानको कृपाले रोचकजस्तो श्रीमान पाएको भन्दै थिइन् । कलाकारिताका लागि प्रेरणा र साथ दिएकोमा प्रियंका रोचकप्रति अनुग्रहित थिइन ।
प्रियंकालाई घरमा पनि मस्ती थियो । उनी विस्तारामै हुन्थिन, नास्ता आइसकेको हुन्थ्यो । जति सुतेपनि कसैले केही भन्दैनथ्यो । उनकै शब्दमा उनी राजकुमारी थिइन । बुहारीको बुहार्तन समाल्न उनलाई कहिल्यै परेन ।
विहेपछि प्रियंकाले अवसर र उपलब्धी एकपछि अर्को गरी प्राप्त गरिन् । उनका लागि विवाह फापेको थियो । नफापोसपनि किन ? प्रियंकाकै शब्दमा भगवानको बरदान पाएकी थिइन् । तरपनि विवाह टिकेन ।
आखिर किन टिकेन ? १० महिना पहिले प्रियंका रोचकलाई बरदानस्वरुप प्राप्त भनि बखान गर्दै थिइन् । सन् २०१३ को डिसेम्बरसम्म आइपुग्दा त डिभोर्स नै दिइसकिछन् । केही समय गोप्य रहेको उनको सम्बन्ध विच्छेद एकाएक चर्चामा आयो । दुनियांलाई आश्चर्यमा पार्नेगरी । प्रियंकाले शुरुमा सम्बन्ध विच्छेदमात्र भएको खुलाइन् । कारण खुलाइनन् । पछि एक अन्र्तवार्तामा भनिन्, ‘म र मेरो कलाकारिताका बीचमा उ आयो, मैले एउटा रोज्नुपर्यो । मैले कलाकारिता रोजे ।’
सम्बन्ध बिच्छेदको एक बर्षअघि उनै प्रियंका टिभिमै भन्दै थिइन,‘रोचकबाट कुनै हस्तक्षेप छैन । प्रेरणामात्र छ ।’ एक बर्ष नबित्दै उनलाई कलाकारिता र रोचक छान्नुपर्ने स्थिति आइलागेछ । श्रीमानश्रीमतीका बीचमा कति छिटो मनमुटावको पराकाष्ठा आइलाग्दो रहेछ भन्ने प्रियंका–रोचकको सम्बन्धबाट देखिन्छ । आखिर जीबनयात्रा हाइवेको यात्राजस्तै रहेछ । गन्तव्य छ तर कहां दुर्घटना हुन्छ एकीन छैन । प्रियंका आफैंले भनेकि थिइन्, ‘ मैले गृहणी हुने मौकै पाएकी छैन । राजकुमारीजस्तो भएकी छु मत ।’ यसो भनेको ४ बर्ष नपुग्दै उनी भन्न विवश छन्, ‘म हाउसवाइफका रुपमा रहन सकिन । मैले स्वतन्त्रता रोजे ।’ सम्बन्ध विच्छेदको एघार महिनाअघिसम्म राजकुमारीजस्तो बनाइ राखेका रोचकले एकाएक प्रियंकालाई गृहणी बनाउन चाहेछन् ।
सर्तक रहौं हरेक सम्बन्ध राम्रो छइन्जेल आर्कषक हुन्छ । कांचजस्तै टलक्क टल्किने । तर, हरेक सम्बन्ध जोखिममा हुन्छ कांचजस्तै टुक्राटुक्रा भइहाल्ने । प्रियंका कार्कीको वैवाहिक सम्बन्ध यसै भन्दैन र ? (अर्को अध्यायमा हामी सम्बन्ध बिच्छेदको अर्को कथा लिएर आउनेछौं । सम्बन्धित पात्र र विज्ञको टिप्पणीसहितको अर्को श्रृखंला छंदैछ ।)
film marriage fail nepali actress priyanka karki